Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini ubhiya ukukhanya-emnyama? besizulu Original yendabuko - amnyama. Kuze ubuchwepheshe kwekhulu le-19 akuvumelekile ukuthi iphathe lwemithombo ukuze isiphuzo atholwe shades ukukhanya. Kasibili zonke besizulu uyabanda amnyama noma ephuma kabili amnyama.
Umehluko ekukhiqizeni umbala wabonakala ngenxa izici of izinhlobo ezahlukene isiphuzo. Konke kuncike sokwenza imithombo, okuyinto esetshenziswa senqubo yokudalwa. lwemithombo ukukhanya kuphela asithathayo ubhiya ukukhanya. Ukuze uthole nebhali imila womile ezingeni lokushisa ethile. Ngo womshini izinhlobo amnyama esetshenziswa amnyama wokushiswa, caramel, kanye lwemithombo ukukhanya ngezabelo ezahlukene.
Dark imila lwemithombo ikhiqizwa ibhali, omisiwe okushisa afinyelela ku-105 ° C. I ubhiya emnyama sengezwe Uhobhane esingaphansi ukukhanya, ukuze ukunambitha ethambile. Ngaphezu kwalokho, kunezinye, umehluko zincane e ubuchwepheshe kulungiselelwa izinhlobo ezehlukene isiphuzo.
Dark ubhiya unfiltered a classic. Naphezu kweqiniso lokuthi yokuphisa zanamuhla ubani oye kwenza kwaba nokwenzeka ukukhiqizwa izinhlobo nge bathanda izinto ezingefani, ezimele ngokuphelele zabo umbala (chocolate nekhofi, ephethe ukunambitheka omisiwe, izithelo ezomisiwe, ngabhema noma sweet, ngezinye izikhathi elinuka), Ongoti eqiniso akubheka iziphuzo yemvelo ngempela.
Lesi sidlo engcono ubhiya emnyama - ushizi hlangothi omnene, ukunambitheka esizolile akuvimbeli azijabulise isiphuzo. Kahle ngabhema. Kuyaphawuleka ukuthi izinhlanzi ezomile kulo mongo, kukho "ihambisana" ezinhle akubhekwa. Futhi, gourmet umbono, ihlanganisa ngokuphelele shokolethe futhi ubhiya emnyama.
Ukusebenzisa isiphuzo ngokuyinhloko okuqukethwe yensimbi okusezingeni eliphezulu, okuyinto ekukhiqizeni izinhlobo egqamile incipha ngenxa lemifanekiso saziso. Okuqukethwe eliphakeme yensimbi - ku Mexican neSpanishi ubhiya emnyama. Ngakho-ke, ukusetshenziswa izinhlobo amnyama kuthuthukisa amazinga e-hemoglobin, eletha ku kwezitho nezicubu umoya-mpilo.
Russian amnyama ubhiya ukunambitheka kanye izinga akuyona wawungaphansi brand adumile European. It uyawuthanda funa ezinzile, kodwa uma eqhathaniswa ukukhanya, ukucabanga kwakhe alibuyekezwa ne ukukhishwa okusha.
Ngezinye izikhathi ngenxa yokuntula ulwazi izici eziningi zokukhiqiza ubuqili flavour ubhiya kuphela umbandela umbala zihlukaniswe izigaba ezimbili: ungqa (elingezansi fermenting) neziphuzo (isibilile). Lena besimo. Eqinisweni ubuchwepheshe njengendlela phansi futhi onemvubelo, ukukhiqiza ubhiya ka ezihlukile. Ngamanye amazwi, ukuze kuphela ngokwalokho umbala okuyinto emakilasini ngenhla zihlanganisa ubhiya, awukwazi.
Kuye kwaphawulwa ukuthi izinhlobo ezehlukene iziphuzo ziqondakala ngezindlela ezahlukene kuye ngokuthi isikhathi sosuku kanye ngonyaka. Kukholakala ukuthi ubhiya emnyama - isiphuzo, ekahle kusihlwa, nokuningi oluncamelayo nenkathi ebandayo. Selani okudingekayo kusuka izibuko noma izinkomishi esakhiwe ngezinto zemvelo (zobumba, ukhuni, izinto ezenziwe ngobumba noma ingilazi).
Iziphuzo ezilimazayo noma kuwusizo isotonic? Ukupheka Ungadliwa Ikhaya
Vitamin compote sea buckthorn. ukupheka zokupheka
Camel mare: Izakhiwo kanye izici ukulungiswa
Acesulfame potassium - ukulinyazwa emzimbeni
Ukhumbula kanjani impilo yakho yangaphambilini? Ukuhlukunyezwa emiphakathini eledlule
Yini-ke nokuthi kungani lomshuwalense nevyleta?
Indlela yokusebenzisa i-screwdriver: imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo
Lourens Harvi - umlingisi British, ngubani izinkanyezi ku Hollywood
Esiphongweni Long ohlangothini izinwele ezinde: ezicashile ubuhle